प्रायः सोधिने प्रश्नहरू - शंघाई मे छाला सूचना प्रविधि को, लिमिटेड
के तपाईं शुद्ध ट्रेडिंग कम्पनी हुनुहुन्छ वा आफ्नै फ्याक्ट्री भएको कम्पनी हो?
हामी वास्तविक पेशेवर सौन्दर्य मेशिन निर्माता छौं, जससँग उत्पादन टोली, अनुसंधान र विकास टोली, बिक्री बल र बिक्री पछि सेवा टीम छ।
हाम्रो कारखाना सुझौमा स्थित छ, द्रुत विकास शहर जुन "शंघाईको पछाडिको बगैचा" को उपनाम छ। यदि तपाइँको समय उपलब्ध छ भने, हामी तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ चीन आउन हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्न!
के तपाइँसँग कुनै वारेन्टी छ?
हो हामीसँग छ। होस्ट मेशिनमा एक बर्षे वारेन्टी दिइन्छ। ह्यान्डलहरू, उपचार टाउको, र भागहरूको लागि तीन महिना निःशुल्क प्रतिस्थापन वारेन्टी।
के यदि कुनै गुणवत्ता समस्या tguarantee अवधि को अवधि मा भयो?
हाम्रो पेशेवर टेक्नोलोजी समर्थन टीमले3mon mon माथी प्रति सित्तै अपडेट सफ्टवेयर प्रदान गर्न सक्दछ। तपाईंको समयमै सेवाहरूको लागि। तपाईलाई सहयोग चाहिएको समयमा टेलिफोन, वेबक्याम, अनलाइन च्याट (गुगल कुरा, फेसबुक, स्काइप) बाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् एकचोटि मेशिनमा कुनै समस्या छ। सबै भन्दा राम्रो सेवा प्रदान गरिनेछ।
तपाईसँग कस्तो प्रमाणीकरण छ?
हाम्रो सबै मेसिनहरूमा सीई प्रमाणीकरण छ जसले गुणवत्ता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ। हाम्रा मेशिनहरू उत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित गर्न कडा गुणवत्ता प्रबन्धनमा छन्।
मलाई के गर्ने यदि मँ मेशिन कसरी प्रयोग गर्ने थाहा छैन?
हामीसँग तपाईंको सन्दर्भको लागि अपरेशन भिडियो र प्रयोगकर्ता म्यानुअल छ।
फोम प्याकेज, एल्युमिनियम बक्स प्याकेज, वा ग्राहकको आवश्यकताको रूपमा।
ढुवानीको बारेमा कसरी?
के हामी उत्पादनहरूमा मेरो लोगो प्रिन्ट गर्न सक्दछौं?
हो, हामी OEM समर्थन गर्दछौं। तपाईंको पसलको नाम, लोगो थप्नुहोस्
सफ्टवेयरले कुन भाषामा समर्थन गर्दछ?
हामी बहु भाषाहरू समर्थन गर्दछौं
के हामी सफ्टवेयर प्रणालीलाई अनुकूलित गर्न सक्छौं?
हो, हामी OEM र ODM सेवा प्रदान गर्दछौं